.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Intro Banner Maker Portable
Flash Intro Banner Maker Portable
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ဝဘ်ဆိုဒ် ခေါင်းစီးနေရာတွေမှာ Flash Banner လေးတွေ လုပ်ပြီး တင်ထားချင်ရင် အသုံးပြုလို့
အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ခံ Background Effect တွေ တော်တော်များများ ပါသလို စာသားအဖက်တွေလည်း
မနည်းများပါတယ်။ ပြီးတော့ Flash သီချင်းသဘောမျိုး လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်နော်။ လင့်တွေထည့်တာရော
အားလုံး လုပ်ရတာ အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို မူရင်းဆိုဒ်မှာ သွားဒေါင်းမယ်ဆိုရင် Trial Version ပဲ
သုံးရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါနဲ့ အနော် Full Version သုံးရအောင်လို့ Patch ဖိုင်ရှာပြီး Potable လေးဖြစ်အောင်ပါ လုပ်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ Screenshot လေးတွေ ပြပေးထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကဲ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် 8.5 MB ပဲ ရှိပါတယ်။
Download: Flash Intro Banner Maker Portable
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့စ် (သို့မဟုတ်) ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးပါ။
Posted by Thurainlin at 07:34
Labels: Flash, Flash Song, Software